Nepal Mihitsoka Anaty Olana Misesisesin’ny Tempoly · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Janoary 2009 13:27 GMT
Ratsy fiantombohana ny taona vaovao tao Nepal. Ankoatra ny krizin'ny herinaratra dia mihitsoka anaty olana misesisesy ny firenena noho ny raharahan’ny toerana masin'ny Hindoisma ao Pashupatinath.
Eo anivon’ny ady hevitra no misy fifanazavana hoe tokony hitohy ve ny fombafomba litorjika tarihin’ny pretra Indianina ao amin’ny Tempoly lehibe sa tokony handray an-tanana amin'izay ny pretra Nepale.
Tempoly Pashupatinath. Nalain'ny mpampiasa Flickr wonker, ampiasain'ny Creative Commons license
Milazalaza amintsika ny tantara navelan'ny ny pretra (mpisorona) Indiana ao amin'ny Pashupatinath sy ny anjara asan'ny Fanjakam-panjaka Nepale i India-Server :
Ho fialana amin'ny fombafomba naharitra 300 taona dia hotarihin’ny Pretra Nepale ny fombafombam-pivavahana amin'ny Ivavahana fa tsy hotarihin'ireo pretra mpifanolobodirindrina indianina. Hatramin’ny taona 1747 no nanomezan'ny Mpanjaka andraikitra ireo pretra indianina tatsimo, izay fantatra amin’ny maha ortodoksa (tsy fivilian-dalany) azy sy tamin’ny fahaizany ihany koa ny fombafomba Hindu.
Teo aloha no Mpiahy ny fampandrosoana finoana an-tempoly ny mpanjaka ka ny mpanjakavavy kosa no sefony. Kanefa, rehefa tsy nahomby tamin'ny fitazonana ny fahefana feno sy ny vokatry ny hetsika miraika amin’ny demokrasia ny mpanjaka Gyanendra dia niorina ny governemanta vaovao tarihan’ny mpitarika Maoista tao Nepal.”
Ho fanapahana ny fomba nentin-drazana dia efa voatendry izao ny mpisorona Nepale. Saingy tsy ny rehetra no faly amin'izany. Mipoaka etsy sy eroa ny fanoherana ny fanapahan-kevitra.
Asehon'i Singapore Star ny sarin'ny tsy fahafaliana mitranga any an-drenivohitra New Delhi:
Maro ireo mihetsiketsika manoloana ny masoivohon'i Nepal tamin'ny alahady ho fanoherana ny mpisorona Indiana ao amin'ny tempoly malazan'i Pashupatinath.
Nanangana teny filamatra hanoherana ny praiministra Nepale Pushpa Kamal Dahal Prachanda ireo mpanohitra efa mafana fo. Nodoran’izy ireo ihany koa ny sarin'i Prachanda. Ampangain'ny mpanao fihetsiketsehana ho manome fanafintohinana ny Hindu tamin’ny nanendrena pretra Nepale ao an-toerana ireto ho tonga pretran’ny tempoly fahagola ny fitondrana Nepale.
Voaramaso amin'ny antsipiriany ihany koa anjara toeran'ny mpitondra Maoista tamin'ny fanapahan-kevitra hanolo ireo pretra indianina.
Lazain'ny “ United We Blog” anefa fa mihoam-pampana ny filazana ny ny tanjon’ny Maoista sy ny adihevitra momba ny zom-pirenenan’ny pretra :
“Nametraka pretra Nepale ho solon’ireo indianina tao amin’ny tempoly lehiben’ny Nepal ireo Maoista mpitondra governemanta tamin’ny baiko mivantana nomen’ny piraiministra. Nanohitra ny fanesorana ny sasany ary samy manana ny tombotsoany manokana avy amin'izany. Tsy misy tokony ilana ny tomany akory manoloana ny fanendrena. Raha ny marina dia hetaheta efa ela ny fanatsoahana ireo pretra indianina sy ny fanendrena Nepale. Efa nolotoin'ny pretra indianina tanteraka aza ny tempoly sady nisy tosika ay tamin'ny fitondram-panjaka izany. Mila miova izany rehetra izany ho fanatsarana ny Tempoly.’’
Nilaza ny Antoko mpampandroso ny finoana ao amin'ny Pashupatinath izay mitantana ny andro alahady fa mbola nisy indray ny fanendrena pretra vaovao nepale anankiroa hanampy ireo pretra tranainy Nepale. Ny fanendrena dia nitranga tamin’ny andro izay nandraisan’ny vondrona sy Kiranti (Gopal Kiranti dia Minisitry ny kolotsaina sy ny fanajariana Maoista) ny baiko avy amin’ny fitsarana faratampony Nepale izay miteny azy ireo hampiato ny fanendrena pretra sy hanomezan’izy ireo alalana ny pretra teo aloha hanohy ny asany mandra-pivaha ny olana.”
Miditra an-tsehatra amin'ny alalan'ny gazety kosa ny Maoista amin'izao fotoana izao.
“Manome toky ny mpitondra ambony Indianina ny praiministra Prachanda fa hanaiky ny didim-panjakana havoakan’ny fitsarana faratampon’ny firenena ny mpitondra fanjakana Maoista ary hanome alalana “hanatanteraka ny andraikitra” ao amin’ny Tempoly Pashupatinath ho azy ireo.”